जनकपुरको राजदेवीमा दुई दिन खोईच भराई, खँसी कहिले चढने ?
राजदेवी पूजा, जनकपुर
कलेण्डर अनुसार यसपाली षष्ठी तिथि र सप्तमी तिथि एकैदिन परेको छ ।
बिहान ११:११ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरको प्रसिद्ध शक्तिपीठ (माता) राजादेवीमा यसपाली पनि दुई दिन खोईच भराई कार्यक्रम हुने आयोजक समितिले जनाएको छ ।
गुठी सँस्थानले खँसी चढाउने र त्यसको टाउको वापत लिँदै आएको प्रति खँसीको दर रु. २०० रुपैयाँ नै कायम गरिएको हो । गुठी सँस्थानले बोकाबलीको लागि आवश्यक पर्ने रसिद काटने कार्य सुरु गरेको छ ।